Vanogona Xians Iva Fun? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ini chete vakatarisa ichi Ja Rule Bvunzurudzo zuro. Akanga achitaura pamusoro ake nazvo machechi. In ruzivo ake machechi nguva dzose akati asvika sewe, asi haana ndairevesa. Haana kumbobvira welcome. Zvino vanhu vakabvunza kana akabvuma Kristu muruoko hwake, Akati akanga asina kugadzirira. Akafunga kuti aireva aifanira kuita zvinyorwa vhangeri ikozvino. Mufananidzo raakanga apiwa chiKristu chaiva rimwe apo iwe vaifanira kuchinja zvose nezvako; iwe aifanira kurega kunakidzwa zvose wabatwa kunakidzwa. Sokunge ava muKristu ndicho chinhu chokupedzisira waizozviita kana iwe aida ufare!
Heano mazano mafaro chinorondedzerwa duramazwi. Fun ndiye: A kunobva tifare, chivaraidzo, kana mafaro. Hapana mubvunzo kuti kuva muKristu kunoreva kunzwisisa kwako uye ruzivo kunakidzwa, chivaraidzo, uye mafaro zvichachinja. Kana muri kushamisika kana anogona kugara zvakafanana, hahungangovi. Hapana mubvunzo kuti kuva muKristu anochinja nzira waunoona upenyu.
The mubvunzo: kunobatsira kana kurwadzisa mafaro yako? Ko chiKristu muvengi kunakidzwa kwako, chivaraidzo, uye mafaro? Kana kuti kukubatsira kuwana mufaro, chivaraidzo, uye mafaro avo vechokwadi mupfungwa? Has wose mutsika dzedu rwawana zvakanaka? Ko chiKristu uye mafaro pane pakatarisana kumagumo chakarondedzera?
Ndinofunga mumwe zvikonzero vanhu nezvazvo chiKristu nenzira iyi ndechekuti nzira vaKristu mumafirimu. Chero Guy wechiKristu firimu kana TV inoratidza akaipisisa. Unovaona Kazhinji kutonga uye corny. Vanhu zvisiri caricature vaKristu vakawanda uye kufunga zvikuru pusa zvinhu.
Chikonzero chechipiri ndechokuti vamwe vaKristu uye vaya vanozviti vaKristu kupa kure kuti vibe. Ivo inobatsira kuti kufanana nevechiduku. Vamwe vaKristu havararami kunakidzwa chinhu uye mhosva pamusoro Mwari, sokunge imhosva yake.
Saka chii Ndinofunga? Ndine mhinduro maviri mubvunzo kuti usiku. Ko ava muKristu kureva mugumo mafaro wangu? Mhinduro yangu yokutanga: Aihwa
ini. No - Kuva muKristu Kusingarevi Pachaparadzwa Fun Your
Kana uchinyatsoda pafunge, zviri ane vasinganzwisisike mubvunzo. "Ko ava muKristu kureva mugumo tifare, chivaraidzo, uye mafaro muupenyu hwangu?"Rinoti chinhu nezvaMwari kubvunza mubvunzo. Kana kuva muKristu kunoreva kutevera Mwari kuburikidza nokutenda muna Kristu, Saka nepamwe mubvunzo zviri achibvunza: Mwari vanoda kuti kuva dzisiri inakidzwe neupenyu? Kuti tipindure hongu anoti chinhu nhema pamusoro pake. Ndiye Musiki wezvinhu zvose zvipenyu. Chokwadi anoda kuti unakidzwe noupenyu, kuti akasika.
Zvakafanana vachibvunza kana Jay-Z kana Kendrick Lamar anoda kuti vavenge Newest Album ake. Haana kuda kuti chete kutambudzika kubudikidza uye ruvengo nawo? Kana vakaita Steven Spielberg aida kuti kuvenga kufirimu ake, kana aida kuti dóže kure nokuti vawaivenga Lincoln zvikuru. Zvakanaka Ichokwadi kwete! Vakaita izvozvo, muchidimbu, kuti vamwe kunakidzwa.
Life kwakasiyana, nokuti haasi vamwe varaidzo, asi pane zvakafanana. Zvatinoziva kubva Rugwaro ndechokuti Mwari ndiMwari akanaka. Iye akasika upenyu. Akatiita nomufananidzo wake uye iye anoda kuti tirarame kuti noupenyu zvizere. Anoda kuti tinakidzwe noupenyu, uye ndinomurumbidza nokuti.
Hapana muBhaibheri kunoratidza kuti Mwari haadi kuti tive hwedu. Paunoverenga Bhaibheri kuti hazvisi mufananidzo uchazova kuwana. Nzira vanhu nezvazvo chiKristu ungave kufunga paiva ndima apo Jesu anoti, "Kana imi kunditevera, unofanira kuva usafara, kuvenga zvose, uye achizvuzvurudza vamwe pasi nemi. "Asi hausi kuenda kuwana chero mavhesi sezvizvi.
Pachinzvimbo uchawana Mwari achida kuti tifarire hwedu. Ndiri kuzoverenga vaviri ndima kuti ndinofunga pfungwa iyi panze.
Vanhu vanofunga Mwari anoda kutitadzisa zvinhu zvakanaka, asi nhema. Teerera James 1:16-17.
Musanyengerwa, hama dzangu dzinodiwa. Chipo chose chakanaka nechipo chose chakaperedzerwa chinobva kumusoro, chichiburuka kubva kuna Baba vezviedza uyo usina kupinduka kana mumvuri yakafanira neshanduko. (James 1:16-17)
Mwari haaedzi kutitadzisa zvinhu zvakanaka; Mwari ndiye Mupi wezvinhu zvose zvakanaka. Iye panobva. Ndizvo zvakafanana vana panguva nherera vachibvunza kana vanhu vanobhadhara kuti pokugara kwavo uye mbatya vanoda zvinhu zvakanaka. Ivo mari zvose saka unorevei? Ndicho chinhu musoro mubvunzo.
Mwari akasika ushamwari uye muchato. Mwari akasika vachinyemwerera uye kuseka. Ndivo zvose zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka sevadzidzi haadi kuti tive nazvo zviri pusa.
Zvakadini naJesu? Ane chinhu kutaura nezvazvo? In John 10, Jesu rinosiyanisa pachake nevadzidzisi venhema. vadzidzisi venhema ava kutungamirira vanhu vakatsauka; vaiva vafudzi vakaipa. Jesu anovadana mbavha.
"Mbavha anouya kuzoba, kuuraya, uye kuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu, uye ave nohwakazara. " (John 10:10)
Izvi anoenda zvakananga pamusoro chii kazhinji vanhu vanoti mutsika dzedu. Vanofunga Mwari anoda kuba. Kuba mufaro wedu, rufaro, uye rwokusarudza. Kuti Mwari anoda kutiuraya uye achizvuzvurudza isu pasi. Asi Jesu anoti, Akauya kupa upenyu hwakazara kana hupenyu huzere. Anoda kuti tirarame hupenyu hwedu zvizere. Tichataura zvakawanda nezvazvo gare gare.
mupisarema 16, David ari kutaura naMwari uye pano ndipo zvaanotaura.
"Iwe kundizivisa gwara roupenyu; pamberi penyu pane muchandizadza nomufaro; kuruoko rwenyu rworudyi panezvinofadza nokusingaperi. " (Pisarema 16:11)
Saka kuuya pedyo Mwari haitungamiriri bhowa kusuruvara, inotungamirira mufaro. Hakuna mufaro bedzi asi muchandizadza nomufaro. Uye panezvinofadza. maminitsi Kwete mashanu kana mafaro makore mashanu, asi mafaro nokusingaperi.
Ndingapinda kwemazuva pamwe nendima akadai. Chikristu hakusi muvengi kunakidzwa, chivaraidzo, uye mafaro. Ndicho chaizvoizvo inoenda kufadzwa kwechokwadi, chivaraidzo, uye mafaro.
Vhiki rapera, mudzimai wangu uye ndakaenda kunoona Gravity muna IMAX 3D. Munoziva ivo kukupai guru clunky magirazi aya kupfeka. Asi zvakadini kana pane magirazi avo isu vakauya hope dzedu masiki kubva pamba? Munoziva zvinhu imi kupfekwa sechinhu ekuverengesa vasanzwa zvose chiedza? Haufaniri kuona chinhu asi rima.
Zvino chii chingadai chakaitika kana panzvimbo 3D magirazi isu kupfeka hope masiki? Taizorega kurasikirwa firimu yose. Asi sezvo isu kuisa ivavo 3D magirazi akanga zvinoshamisa. Rainge taiva firimu. Ndakanga akabata pasi zvokunwa zvangu saka haina waparadzwa mudenga. Stuff waiva yakatipoteredza. Stuff kwataiva. The magirazi vakauya kuti chiitiko muupenyu.
Tinobata Mwari akafanana ari kuedza isu mumaoko kuti hope Mask mumafirimu, apo chaizvoizvo kuedza isu kutambidza 3D magogorosi. Asina kuedza kuvhara mufaro wedu, uye kutisiya murima. Anoda mufaro wedu kuti dzinowedzerwa uye zvizere. Anoda kuti tinakidzwe noupenyu zvazvinofanira kuti hunakidze. Zvinosuwisa hatizivi nguva dzose kuziva chii kuti sokunge.
dambudziko wedu tiri pasi pfungwa yokuti mafaro kunoreva kuita chero tinonzwa sokuti chero nguva. Asi kana zvechokwadi tikafunga nezvazvo, tose tinoziva kuti ipfungwa dzakaipa. Ndiani anoda kuti uve muranda zvose sokuti kuita? Tiri chinji.
Mwanakomana wangu anoda kuti unakidzwe uye iye anofunga nokunamatira munwe wake pamagetsi ndiyo nzira yakanakisisa yokuita kuti. Iye anofanira nhungamiro kubva kwandiri. Uye kana mwanakomana wangu kuenda unakirwe pane kufa anofanira kuvimba neni. Anofunga achifamba pasi masitepisi anotarira mafaro. Asi sezvo mukuru, Ndinoziva kuti arege kufamba zvakanaka uye iye ndichava koromoka pasi.
Mwari ndiye Musiki woupenyu uye Anoziva. Tinoda zvose kubvuma kuti hatizi zvose-achiziva. Pane zvinhu tisinganzwisisi. Uye nekuti tiri vatadzi, tinokoshesa zvakaipa. Tinofanira kuvimba naMwari uye chimiro chake.
Vamwe vanhu vanofunga, "Zvinoita zvakanaka asi Mwari ane vose mirayiro inotitaurira kuita kunakidzwa zvinhu." Uye imi makarurama; kune mirayiro ngaandidzivise isu kubva zvimwe zvinhu. Asi kuitira kuti mafaro kwedu dzoparara?
Zvinounza neni mhinduro yangu yechipiri mubvunzo uyu. Ko ava muKristu kureva mugumo mafaro wangu? Mhinduro yangu yechipiri: dzimwe nguva.
II. dzimwe nguva – Kutevera Jesu kuchareva Pachaparadzwa Vamwe Fun Our
Handidi kuti kukunyengerai. Kuva muKristu hazvirevi Uchazoti kuramba pachako. Pane zvinhu hwauinawo kuti vakaipa kwamuri, zvinhu zviri kwenguva kuba mufaro pane aipa.
Kudhakwa sokuti mafaro asi kunotungamirira zvisarudzo benzi. Sex muchato asati sokuti mafaro, asi kuti yakadzika pamwero hwepedyo haana kusikirwa kuti kunakidzwa kure kuti kwoupenyu hwose pasi Mwari. Ndiyo zvakadzama nzira yaunogona zvipe kure kune mumwe munhu. Dzimwe nguva nhema sokunge inotungamirira mafaro asi kunokanganisa isu nevamwe.
Sezvatinoongorora kare akabvuma, Mwari akasika zvose zvoupenyu uye Anoziva sei zviri vakafunga kuti hunakidze. Mirayiro yake ndiyo zvakatinakira. Kuruoko rwake rworudyi panezvinofadza nokusingaperi. Zvino isu tisateerera, tiri nokubva mufaro wechokwadi. Mwari haachengeti isu kubva upenyu hwakanaka; tinoramba tiri kubva upenyu hwakanaka kana tikasateerera naYe.
Uye sezvo chiito rudo Jesu anodana tive kuramba tiri.
Zvino wakati kune vose, "Kana munhu achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe, achinditevera. " (Luke 9:23)
Chii Zvinorevei kuramba pachako? Uchizvinyima zvinoreva achiti kwete iwe. vachiramba pachako. Kuramba chii iwe muropa kuita.
Izvi hazvirevi kuridza zvakanaka uye fluffy. Zvichida vakaramba kuti pane kuzivikanwa kadhi. Izvi hazvisi chaizvo vadzidzi. Ko Jesu kungova kudzora uye anorevei uye kutuka?
Dai taiva vakakwana, kutikumbira kuramba tiri kwaizova pusa. Dai taigara zvakanaka uye akachenjera kutikumbira kuti kuramba tiri kwaizova shamisa. Asi kana tiri kutadza kutikumbira kuramba isu rudo. Kana tava kutsauswa uye ndakavhiringidza, kutikumbira kuramba pachedu zvinobatsira.
Haugoni nguva dzose kuvimba pachako. Pane zvinhu hwauinawo kuti vakaipa kwamuri. Kangani mune zvisarudzo zvaiita mafaro, asi iwe aifanira kubata nemigumisiro gare gare?
Jesu ari kutaura kana uchida kunditevera, unofanira kurega kutevera pachako. Zvakafanana kukumbira munhu akabvunza. Kana iwe unoziva iwe tanga kuenda isiri nzira, uye iwe kumbira mumwe munhu kuti akubatsire, haugoni kuramba kuenda nzira yenyu. Kutevera Jesu ari mune imwe pfungwa rokubvuma kuti zvauri vakarasika uye vachida munhu kutungamirira iwe. Saka Jesu ari, regai kuenda. Ndipei mudhiraivho. Unofanira kupiwa pachako kwandiri. Ndiri Tenzi. Ndiri Mutungamiriri. Izvi ndizvo zvazvinoreva kuti kunditevera.
Kana mudzimai wangu akati, kana uchida kuva murume wangu unofanira kuramba iwe, unditevere. Ini ungaora kufanana hu? Kana mwanakomana wangu akati kuti… Ndingada here kushamisika sezvo haagoni kutaura. Kana purezidhendi weUnited States akati kuti, Ndinoda kuramba. Kunyange kana mufundisi wangu akati, kuramba iwe uite chero ndinoti zvisinei nokuti chii, Ndingada kuenda imwe chechi. Sei? Nekuti handidi kupa itsvo hwangu zvachose pamusoro mumwe munhu zvivi. Ndizvo pusa. Hazvina kundibatsira. Havagoni kutungamirira upenyu hwangu zvakakwana kana. Vane nyaya dzavo.
Asi Jesu Kristu haasi mumwe munhu chivi. Iye mutsvene, Ndiye Musiki wangu, uye iye akafa kuitira vatadzi vayananiswe naMwari. Iye akavimbika. Anoziva hwangu upenyu zvinofanira kutarira akafanana. Asina utsinye, Ari kundida. Kuva muKristu kunoreva kuti iwe wemasaini kuti kutaura kwete kuna pachako dzimwe nguva.
Kana usiri achiti kwete iwe nguva dzose, unofanira kuzvibvunza kana iwe uri kutevera Jesu. Nekuti tiri zvakaipa nguva dzose uye tinofanira kubatsirwa Rake.
Imwe realest mabhuku muMagwaro ndiro bhuku raMuparidzi. It ingangoreva rakanyorwa naSoromoni. mariri, anotaura nezve sei zvose hazvina maturo. Sezvo akanga yakawanda zvose, Iye anotaura ruzivo. Heunoi zvaakataura.
"Uyo anoda mari haangavi kugutsikana nemari." (Ecclesiastes 5:10)
Saka unogona kutora ichi, sezvo pano isu tiende. Vanovenga zvose, kusanganisira mari. Mwari haadi ini kunakidzwa nayo. Kana unogona kuzviona sezvo Mwari kudzivirira iwe kubva kudzingirira chinhu kuti hazvizombofi kugutsa iwe
Teerera zvaanotaura Papera:
Munhu wose kuti anopiwa naMwari fuma uye pfuma uye simba kunakidzwa kwavari, uye kubvuma mugove wake nokufarira ake zvakaoma-ichi ndicho chipo chaMwari. Nekuti iye haangarangariri zvikuru mazuva oupenyu hwake, nokuti Mwari anoramba iye kubatikana nomufaro mumwoyo make. (Ecclesiastes 5:19-20)
Ko kuti zvinopesana? Nakidzwa mari? Ndaifunga akati hazvizorevi mukaguta. Mwari anopa mufaro, kwete mari. Mari zvisingagutsi iwe, zvinongoreva chinoita uchida mari yakawanda. Zviri chimumumu kurarama nokuti. Unogona kuva chinhu, pasina kurarama pasi nokufungidzira nhema kuti achagutsa mweya wako. Mwari ari kuedza inotidzivirira.
Dambudziko redu nderekuti tinoda kunamata chipo pachinzvimbo Mupi, Creation pachinzvimbo Musiki. Tinoda kunamata kanivhasi panzvimbo rokupenda, mapeji panzvimbo munyori. Tinoda kudzingirira mari panzvimbo uyo anogovera zvinhu zvose. Jesu anodana tive kuramba kuti uye kumutevera.
VaKristu havasi unoshambadzirana mafaro nokuda kubhoekana, kana mufaro nokusuwa. Vari unoshambadzirana pfupi mufaro, nokuti mufaro usingaperi. Vari unoshambadzirana zvinouraya mufaro, nokuti upenyu kupa mufaro. Vari unoshambadzirana anopfuurawo, chinji mufaro, nokuti wakatsiga, zvizununguke mufaro yakasimba.
III. Tinogovana Sei Kuti Ndinakidzwe Zvinhu Zvakakodzera?
Tinorarama nokutenda noMusiki wedu.
Tose Live By Faith
Tingava tichizviziva kana kuti kwete, tose tiri vanhu kutenda. Munhu wese. vaKristu, vaMuslim, vaHindu, vaBuddha, Agnostics, Hakuna Mwari-tose kurarama nokutenda, tiri kurarama muchiedza izvo tinotenda chero nguva. Avo imi vatambi vanoita kundiomera. Sei? Nokuti imi munotenda here achakuisa nani pane mutambo wako. Kana sei nezvazvo? Vamwe venyu kuisa kero Google Maps kuwana nzvimbo. Sei? Nokuti makatenda kuti foni yako kukupai zvakarurama mirayiridzo. Kana ukatenda foni yako ungadai kumunyengera iwe, izvo Ndinofunga anoita vangu dzimwe nguva, hamaizopa akarishandisa. Ndaigona kuenda mberi. Asi isu tose kurarama nokutenda.
Ndinofunga upenyu hwakanaka mupenyu nokutenda muna Mwari wakanaka. Iye anotiudza mawanire zvisikwa zvake zvakarurama. Iye isu kunotungamirira mufaro.
nguva ipi tinobata chisiri Mwari sezvo mugumo pachayo hatisi yokuzomboiona nemazvo.
Fun zvaJehovha Not Enough
Asi pamwe unofunga, Handidi kuti. Ndinoda kuti unakirwe. Being varambe vachifara, kunakidzwa iwe haisi zvose upenyu pamusoro. Kana uchifunga kuti, uri chimwe chinhu kutyisa. Kana ukavaka hwako panheyo kunofara, richafa akasvinudzwa achi- pasi apo upenyu hwakaoma. mafaro, kuitwa varambe vachifara, kunakidzwa iwe izvozvi hakuna kukwana. Wadii kuenda pashure mufaro usingaperi?
Uye hazvina kukwana kumirira kusvikira kwapera. Sei kumirira kutanga mhenyu? Regai kudzingana nyepera chinhu uye kutanga kutevera chaicho.
Zvinoita sokuti vachisiya NBA, nokuti zviri nani kutamba NBA 2K musi Dreamcast. Regai kudzingana nyepera chinhu, vagamuchire chinhu chaicho kuti musikana. C.S. Lewis akaratidza zvakafanana pfungwa apo akati izvi:
“Tiri hafu mwoyo zvisikwa kuzvinyengera pamusoro chete chokunwa uye pabonde uye vavariro kana haaperi mufaro unopiwa kwatiri, semwana asingazive anoda kuenderera achigadzira mapai emadhaka munzvimbo yekudyira nekuti haakwanise kufungidzira zvinorehwa nekupihwa zororo kugungwa. Isu tinofara kwazvo” - C.S. Lewis, The Weight yeKubwinya
Ndaimbofunga upenyu hwakanga kupera zvose mafaro aya. Ndakabva ndava muKristu. Paiva zvinhu Ndakaverenga mangwanani musi somuKristu kuti akakoromora wangu wekare mufananidzo upenyu hwakanaka. Heuno muenzaniso.
Tose vakanzwa vanhu kutaura nezverufu nguva nenguva. Isu Makanzwa vanhu vanoti, "Hapana muupenyu ndechechokwadi asi rufu nemitero."Mumwe yakakurumbira rapper akati, "Ndiri kuedza kurova upenyu chikonzero handigoni kubiridzira rufu." Vanhu kunzwisisa kuti rufu hazvingadziviswi. Asi sezvo muKristu wechiduku, Ndakaverenga ndima nezvorufu muBhaibheri kuti akanga akaita ndakanga akambonzwa pamberi hapana. MuApostora Pauro akataura nezvorufu vari vatorwa nzira. Pauro haana kungoti rufu aiva nechokwadi, Akahutora rimwe danho. Akati, "Kufa pfuma."Chii!?
Rufu kana uropi hwako, mwoyo yenyu, uye mapapu ako kurega kuita basa ravo. Rufu zvinoreva mhedziso upenyu uye kuparadzana nevemumhuri. Rufu zvinoreva basa kuti upenyu hwako huri pamusoro. Kusiyana nezvimwe miedzo yedu, rufu, nokuti munhu anenge afa, chaizvoizvo "kuguma kwenyika"– mugumo uyu mumwe racho. Saka sei aigona kufa angava pfuma? Ini handigoni kuita mari kana ndikafa? Ini handigoni kuwedzera mamiriro angu kana ndafa. Vakanga kufanira yangu ekare pfungwa upenyu hwakanaka.
Zvakanaka kuti ini kunzwisisa Pauro airevei nemashoko aya mana mashoko-kufa ifuma-ndaifanira kunzwisisa mana akasvika pamberi pavo chaipo. In Philippians 1 Pauro anotsanangura nei sokuti kuva OK pamwe kana kuramba mupenyu kana kufa pane mumaoko vaimutambudza. Anonyora mundima 21, "Kurarama IS Kristu. "Nemashoko iwayo, Muapostora akandiudza chii upenyu chaizvoizvo zvose pamusoro- kwete mari, kwete basa rangu, kunyange mhuri- asi Jesu. Sei wangu aigona anongozvifunga, chinzvimbo-yakazara worldview vararame pedyo chokwadi kuti?
Upenyu hahuna zvahunoreva kunze Kristu, nokuti Kristu ndiye chii zvose pamusoro. Naizvozvo kunakidzwa nezvinhu zvakarurama, tinofanira kunakirwa navo nenzira zvinopupurira chokwadi kuti.
Zvose zviri nani kana vakanakidzwa vari akapoteredza zvazvinofanira kuva. Kana tikabata chinhu chakafanana kuguma pacharo kuti zvakaipa. Tinofanira navo senzira pakuguma kubwinya kwaMwari.
Hatifaniriwo chete pabonde nevakadzi vakawanda sezvinobvira? Kana kunyange chete ani uri ukama hwepedyo? Bonde Chiri zvakanakisisa vakanakidzwa kuroorana sungano. vanhu vaviri vakaita mumwe nomumwe nokuda kwoupenyu hwavo, kwete kuenda kwese. Hapana kudikanwa kusachengeteka, kunyara. Ushamwari zvakanakisisa vakanakidzwa muchirevo chechinyorwa chino. Pane kuzvininipisa, ruregerero, nyasha, rudo.
Mari iri zvakanakisisa vakanakidzwa apo haizi ainamata. Power yakanakisisa vakanakidzwa apo haizi ainamata. Chii chinoitika kana ichitapira kure? Waini zvine mwero kunopfuura kudhakwa. Uye add Chokwadi unogona kunakidzwa nemimhanzi uye mafirimu. Asi funga nezvokuti inesungano zvinoreva zvose upenyu: Kristu. Zvose zviri zvakanakisisa vakanakidzwa kana zviri pasi Kristu.
We akadamburwa, uye Kristu akauya kutiisa shure pamwe. Apo tinonamata mari, kana ushamwari, kana pabonde, zviri chigumbuso Mwari. Uye tinokodzera kuva nokutongwa nokuda kwokudarika avo. Asi Mwari akatuma Kristu. Jesu haana kuva nechinetso kunakidzwa zvakaipa, kana kunakidzwa nezvinhu zvakanaka chivi nenzira. Asi Jesu akatora chirango kwokudarika kwedu pamuchinjikwa. Akamuka kubva muguva uye anotipa upenyu husingaperi.
Kana isu tichati kusiya edu ekare nzira shure uye munamatire Kristu tinogona kuregererwa, uye tinogona kupinda mufaro naTenzi wedu. Hatidi kurarama upenyu hwedu zvakanaka zvino. Asi Achatora kutipa mufaro uye mafaro nokusingaperi.
Victor • Gumiguru 24, 2013 pa 2:17 pm • pindura
Triggz • Gumiguru 24, 2013 pa 4:36 pm • pindura
Wow!uri chaizvo mudziyo waMwari brah,uye uvimbe neni unokurudzira zvakanyanya nekutenda kwako uye nekutenda kwako muna Mwari.zvinyorwa izvi zvakandichinja nenzira hombe uye ndinovimba unoramba uchinyorera kwatiri nekuda kwedu tese.Rimwe zuva ndinoda kuve senge iwe,(Ndinoziva ndinonzwika senge ane makore matanhatu ekuberekwa)cause ndatochinjisa zvangu Rap and Poetry to Christian cause ndizvo zvandiri kurarama izvozvi,Kutenda kumatragi akaita SEZVINOONA MWEYA uye HiP HOP.gara Wakakomborerwa
Dawg uye Chengeta Kutenda 116!
Deondre • Gumiguru 24, 2013 pa 4:41 pm • pindura
Ini handidi kusiya komendi hama ndinotenda waunza nzwisiso yakajeka kumuteereri.May GOD ramba uchikukomborera munharaunda dzese dzehupenyu hwako Muzita raJesu…
Maurice • Gumiguru 24, 2013 pa 4:51 pm • pindura
Ndiko kuvhura kwepfungwa chaiko. Ndinotenda Mwari neshoko rawakagovana.
Geordan • Gumiguru 24, 2013 pa 5:09 pm • pindura
Paakataura nezvazvo “Cheesey Christian Mumhanzi” Ndakatsemura, lol. Ndatenda , rwendo.
Cole muKristu • Gumiguru 24, 2013 pa 5:11 pm • pindura
Ichi chiitiko chinotyisa zvakadaro! Kutenda nemashoko uye kurudziro, rwendo! Hazviendi zvinonzwika.
Jessie kuenderana nemamwe mazita • Gumiguru 24, 2013 pa 5:17 pm • pindura
Zvakanyatsotaurwa. Ndatenda, Ruach HaKodesh, yekutaura CHOKWADI kuburikidza nemudziyo unoda. KUTYISA..
BrookeMeghan • Gumiguru 24, 2013 pa 5:24 pm • pindura
Amen! Ndatenda nekugovana uye nekurudziro.
“Kurarama ndiKristu, uye kufa ifuma.” Philippians 1:21 – tenzi, dai tikanyatso kurarama izvi muhupenyu hwedu! Tinokutendai nerusununguko rwatinarwo mamuri.
Jeremiah • Gumiguru 24, 2013 pa 5:25 pm • pindura
Kuverenga izvi kwaingoita senge ndanga ndichinzwa
mharidzo yacho , Izvo zvakanaka ,, kubwinya !!!!!
Caleb • Gumiguru 24, 2013 pa 5:49 pm • pindura
Zvinhu zvakanaka Mr.. Lee.
Shaunda • Gumiguru 24, 2013 pa 7:04 pm • pindura
Kujekesa kutsungirira pane chinangwa chemufaro uye mufaro muhupenyu hwedu. Kunyatsonakidzwa nemabatiro awakaita iwo mazwi kubva kuC.S.. Lewis achitaura nezvemwana ari kutamba nematope. Tinogona kunakidzwa noupenyu zvizere semaKristu!
MasiyaChoice • Gumiguru 24, 2013 pa 11:16 pm • pindura
Hongu kufa kufa kuwana. Kristu akafira kuti tigone kurarama uye isu tinofanira kumuraramira. Sevechidiki ngatifirei mumafaro epanyika uye tirarame mupfuma yekudenga.
STEFA • Gumiguru 25, 2013 pa 12:38 ndiri • pindura
Ndinoyemura Blog Trip Lee. Ndakanetseka neizvi zvakanyanya pandaive kusekondari, kunyangwe pane dzimwe nguva izvozvi achiri kukoreji…kungoedza kunzwisisa manakiro ezvinhu nenzira inopupura kuti Jesu ndiye zvese uye izvo zvinoita sekunge zvakararama kunze. Ndinokutendai zvakare.
MotsiriLebea • Gumiguru 25, 2013 pa 5:34 ndiri • pindura
Wow. Ndashaya remuromo. Sezvazviri chaizvo ? Ndiri kureva kuti ndaifunga kuti ndinofanira kuchinja myslef ndisati ndauya kuna christ asi ndaikanganisa.
Yuri • Gumiguru 25, 2013 pa 9:19 pm • pindura
Zvinhu zvinotyisa! Ndiri kupa mharidzo yechechi kune vakomana vachiri kuyaruka vhiki ino pane zvazvinoreva kuve zvehumhizha hwaMwari. Aya ane makuru mapoinzi andingangodaro ndichafukidza navo futi.
Kiara • Gumiguru 26, 2013 pa 7:04 pm • pindura
Iyi posvo chikomborero chechokwadi.
Dzingirira • Gumiguru 28, 2013 pa 3:52 pm • pindura
Yakakura meseji, rwendo. Ramba uri chiedza munyika ino ine rima uko ruzhinji rwemaselebs & vezvenhau vanoedza kuchengetedza Kristu kubva pane zvese zvinobvira. Vanhu vakanaka, vakaponeswa neropa rake, ichagara ichikunda pakupedzisira!
Shauneil • Gumiguru 28, 2013 pa 5:16 pm • pindura
anomban • Gumiguru 28, 2013 pa 5:19 pm • pindura
Ndinofanira kutaura… Iri ishoko rinobva kuna Mwari. Ini ndakataura nezve izvi nezuro pakati pevamwe vangu vechidiki uye vakandiona semunhu akaraswa. Ndiri kunzwa kusunungurwa uye kusimbiswa neizvi izvozvi. Hapana kudzokera shure… Jesu nokusingaperi. Zvizhinji zve nyasha dza Mwari mukoma.
Ricky Jordan • Gumiguru 29, 2013 pa 2:26 ndiri • pindura
Ichi chikomborero chaicho Rwendo. Ramba uchishandira humambo.
uche • Gumiguru 29, 2013 pa 3:16 ndiri • pindura
Izwi rimwe chete 'wow!!!’
waEnani • Gumiguru 29, 2013 pa 8:43 pm • pindura
Maita basa mukoma. Ini chaizvo aida ichi. Sewechidiki wechiKristu achiri kuyaruka, Ndagara ndawana kududzirwa kusiri iko kwekunakidzwa nekunakidzwa. Asi mushure mekuverenga izvi, Ndinonzwa sekuti ndinonzwisisa zvishoma zvirinani. Ini ndinotenda chaizvo izvi. Thanks zvakare, Mwari vakuropafadze iwe nemhuri. Vanokuda muna Jesu…
Elvis • Gumiguru 29, 2013 pa 11:16 pm • pindura
Kufara nezvawakave uchiita newebsite ino uye chechi yako yemuno…Ndiri kunyanya kufarira kukuona wakadzokera mu studio…Ini ndakajutirwa izvo zvauri kuuya
Chaunelle Lewis • Gumiguru 30, 2013 pa 8:11 ndiri • pindura
Aya aive akanaka meseji, yakandishumira uye ndinokutendai zvakanyanya nekutaura nezvevhesi vhezheni vePhillipian 1:21. Ndanga ndichiedza kanoverengeka kuti ndinzwisise nekuteerera mharidzo. Ini ndinonamata kuti Mwari varambe vachikushandisa iwe kusimudzira uye kuvaka-pamusoro pehumambo. Mwari vakuropafadzei mukoma.. runyararo & rudo ♡
DavidMoyo • Mbudzi 1, 2013 pa 8:01 ndiri • pindura
Uyu anotyisa William, nyatso kukoshesa kutapurirana kwako uye kunyara kwako kuzvibvumira kushandiswa naIshe. Mwari vakukomborere
Marjorie • Mbudzi 1, 2013 pa 7:22 pm • pindura
Iyi uye nemamwe meseji pane ino blog iri panguva chaiyo & pane pfungwa! Rumbidzai Ishe! Ndatenda nekugadzira iyi blog, Ini ndinogara ndichikurudzirwa kwazvo munaShe nezvako zvawatumira. Ndokumbirawo murambe muchitaura nekunyora! Mwari vakuropafadze iwe nemhuri yako!
Jennifer • Mbudzi 15, 2013 pa 7:29 pm • pindura
Wow! Meseji iyi yakataura neni chaizvo! Ndinokutendai zvikuru nezvamunoitira Mwari uye nekusave nokunyara kweEvhangeri. wo, yekutendera Mwari vatore hupenyu hwako. Mwari ngaarambe vachikukomborera iwe nemhuri yako inoshamisa!
Iwe uri chikomborero chakakura zvakadaro kuhupenyu hwangu!
Endy • Ndira 19, 2014 pa 5:27 pm • pindura
Wow!! Kusvikira panguva ino, Ini handi vhura izvi,kufarira,kwechokwadi kwechiKristu kwaive jst ngano senge ini ndaiverenga kubva ku #Francinerivers mabhuku. Ndinoshaiwa mazwi ekutaura chero chinhu. Ichi chidimbu chakabata chimwe chinhu mandiri uye ikozvino ndagadzirira 100% kuraramira Mwari..thanks TL..Mwari vanokubatsira kuti urambe uri chikomborero. #Amen!
Michael • Ndira 29, 2014 pa 1:35 pm • pindura
Great romukova, ndainyanya kufarira mifananidzo.
Kana isu takaponeswa zvechokwadi, uye Mwari akasika matiri moyo mutsva wakachena, mirairo yake haizove yegirivhi. (1John)
Regai vandibate zvakaipa, tichiri kuda kudzidziswa, asi kana isu takaponeswa pane zvinhu zvatisingade kuita. Muedzo ucharamba uchiuya pasina mubvunzo, asi Mwari haatibvumidze kuyedzwa pamusoro pezvatinogona kutakura. Iye achagadzira kupukunyuka.
Josh • Kukadzi 17, 2014 pa 2:48 pm • pindura
Rwendo izvi zvinoshamisa! Ndotenda kwazvo! Ndinoda mharidzo dzenyu, zvinoita kuti ndione kuti tine Mwari akanaka. Maita basa mukoma! Chengetedza iro rakanaka basa kumusoro.
ndiri 17 zera, uye ini ndinongoziva Mwari vane ramangwana rinoshamisa rakaradzikwa kwandiri.
Ndinodawo kunongedzera mumharidzo yako yakanyorwa. Wakanganwa tsamba lol “OF” iwe wakanyora “f” lol Kungobata ziso rangu ndizvozvo. Zviri kupi
“… Uye add Chokwadi unogona kunakidzwa nemimhanzi uye mafirimu. Asi funga nezvokuti inesungano zvinoreva zvose upenyu: Kristu. Zvese zvinhu zvinonakidzwa zvakanyanya kana zvaendeswa kuna Kristu.”
Ndingafarire kunzwa zvakawanda! Maita basa mukoma!
Galactic • Gumiguru 19, 2014 pa 12:13 ndiri • pindura
Mhoro, zvese zviri kufamba mushe apa uye zvehupombwe munhu wese arikugovana ruzivo, zvakanaka chaizvo, ramba uchinyora.
Justin • Gumiguru 29, 2014 pa 9:57 pm • pindura
Wow iwe uri anoshamisa munyori uye mudzidzisi! Nzira yaunoparidza nayo Vhangeri iri kujekesa. Ini ndaigona kuteerera nekuverenga mharidzo dzenyu zuva rese! Icho chikafu chechokwadi chemweya. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako!
Olobz • Zvita 1, 2014 pa 5:56 pm • pindura
Akanaka akanaka murume akanaka.
Yako yakanaka modhi uye kurudziro. Ndinovimba tese tinoona Kudenga, ipapo uye ipapo chete ndipo patinogona kuimba 'Sweet Kukunda’ mariri kuzara. Nekuti ikozvino Mwari komborera
#116 #Unashamed #Dashshow_we_roll_and_should_roll
Keaton • Kukadzi 22, 2015 pa 12:28 ndiri • pindura
BRO, Ndinoyemura iwe zvakanyanya semuparidzi kupfuura muimbi uye iwe ndiye wandinofarira rapper. Ndinonyatsoda mukana wekutaura nemushumiri kuti ashumire. Ndinonyatsoda moyo wako kwaari. Kana ndichigona, Handifunge kuti unofanirwa kusiya mimhanzi 100%. Ndinotenda kuti ipuratifomu iyo Mwari yaakakupa kuti musimbise vatsvene uye muparidze mutadzi. Ndinonamata iwe unokwanisa kuyananisa chishuwo chandinoziva kwazvo kufudza vanhu vaMwari uye zvako zvinoshamisa mimhanzi zvipo. Mwari vakuropafadze hama inodiwa!
tamsyn • Zvita 28, 2015 pa 2:45 pm • pindura
Mweya yakakosha kwazvo kuna Mwari! Uye wow pandinoona zvinyorwa zvevakawanda ndiri kutya basa iro Mwari arikuita kuburikidza newe. Zvino shamisa. Ramba uchienderera mberi. Komborerai mbeu yega yega uye nemvura yeVamwari vakashandisa iwe kuti vapararire paPasi rake rakanaka. Ngaave Anokura nekupfava mbeu dzese.